Archive du 20180508
Depiote ho an’ny fanovana “Tsy miresaka amin’ny mpamono olona izahay”
Nihaona tamin’ny SEFIP (Sehatra Eokiminika Fandinihana ny Fiainam-Pirenena) sy ny FFKM (Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara) teny Ambohimanoro omaly maraina ny solontenan’ireo depiote ho an’ny fanovana miisa 7.
Tapi-dalan-kaleha ny fitondrana Miantso vonjy amin’ny vahiny
Tsy misy fanantenana firy ho an’ny fanjakana Rajaonarimampianina intsony amin’ny mbola hitantanany ny tany sy ny fanjakana na ho ela na ho haingana. Mety hahavita ny fe-potoam-piasany ihany angamba raha maharitra 5 volana,
Depiote nilaza fa notambazana 200 tapitrisa Ariary Nampiaka-pofona an-dRivo Rakotovao
Nampiaka-pofona an-dRivo Rakotovao, filoha nasionalin’ny antoko HVM ny fanambarana niendrika ampamoaka nataon’ny depiote Razafindrafito Lova Narivelo na Popil tany Fianarantsoa nandritra ny hetsi-bahoaka notarihin’ny depioten’ny fanovana ny sabotsy 5 aprily teo.
Mahazoasy Freddie “Naman’ny mametra-pialana ireo depiote tsy mivory”
Mangingina sy tsy dia handrenesam-peo ny etsy Tsimbazaza satria takona tanteraka noho ny fisian’ny hetsika tarihin’ny depiote mpanohitra na ny depioten’ny fanovana, izay efa nilaza fa tsy hivory.
Tolon’ny depiote miisa 73 Aza ajanona ary asio tamberina any amin’ny vahoaka, hoy ny FMI Malagasy
Hatramin’ny taona 1972 no nisy hetaheta sy hetsi-bahoaka, hoy ny filohan’ny Fahefa-MIvidy izao no ilain’ny Malagasy na ny FMI Malagasy, tarihin’ny filohany, Jean Jacques Ratsietison, teny Mahatony Soavimasoandro, omaly.
Antoko politika Otrikafo Aleo hifandamina ny samy Malagasy
Mitohy hatrany ny fanambarana ataon’ny antoko politika mitsangana eto Madagasikara noho izao krizy misy eto amin’ny firenena izao. Anjaran’ny antoko politika Otrikafo indray ny naneho ny heviny omaly alatsinainy teny amin’ny foibeny eny Andravoahangy.
Benjamina Ramarcel Ramanantsoa Efa ela no niala tao amin’ny MTS
Fantatra izao fa anisan’ireo antoko handray anjara mavitrika amin’ireo fifidianana hitranga eto amin’ny firenena ny antoko MTS tarihan’ny minisitry ny fizahantany Roland Ratsiraka.
Razafindrakoto Fidy Mamy na Besetroka Mankasitraka ny HCC izahay aty Ambatondrazaka
Mankasitraka ny fanapahan-kevitra mampiseho ny fitiavan-tanindrazana navoakan’ny HCC farany teo izay mampiseho ny fanarahan-dalàna sy mampanjaka ny fahamarinana ka mampamarim-pototra ny fitakian’ireo depiote 73 ho an’ny fanovana izahay aty Ambatondrazaka, hoy ny CT teo aloha Razafindrakoto Fidy Mamy na i Besetroka.
Salama Jean aa ! Ahoana ihany ianareo ity ee ! ilaozy mivalavala eo ihany ary fa aza miala koa. Isan’andro efa manondrana foana mbola tsy tonga saina ihany.
Fiarahamiasa CNaPS -FJKM 60 mianadahy voaofana tany Manakara
Talen-tsekoly sy mpampianatra, mpitandrina, pasitera, loholona, diakona no tonga nanatrika izany fiofanana izany nandritra ny 2 andro tao Manakara .Nahatratra 60 izy ireo ary naneho ny hafaliany tanteraka ny filohan’ny synodam-paritany Atsimo Atsinanana,
Orlando Robimanana « Misy vola azo hanatsarana ny fiainan’ny Malagasy eto »
Nivoaka tamin’ny fahanginana ihany koa Atoa Orlando Robimanana manoloana ny toe-draharaham-pirenena misy ankehitriny. Nambarany fa tsy marina ny filazana fa tsy misy ny vola entina hanatsarana ny fari-piainan’ny Malagasy.
Rovan’Ilafy Hanamboaran’ny kaominina fotodrafitrasa ao anatiny
Tsy resabe intsony fa tena hanorenan’ny kaominina Ankadikely Ilafy, distrikan’Avaradrano, fotodrafitrasa toy ny EPP sy ny CEG tokoa, ao amin’ny faritra misy ny Rovan’Ilafy.
Mpisehatra eo amin`ny sarimihetsika Vaky tanteraka ny ady amin`ny OMDA
Tsy mbola miravona ny ady mangatsiaka nisy teo amin`ny OMDA sy ireo mpisehatra amin`ny sarimihetsika, famokarana haino aman-jery, kilalao an-tsary ary fakana sary eto Madagasikara.
Brice Christopher Rabevihavy Misy fanahy maloto te handatsa-dra eto
Milaza ho nahazo fanambarana avy any amin’ny tontolo tsy hita maso ifandraisany any hatrany isaky ny 48 ora tato ho ato ny mpitarika ny fikambanana Ankata zana-drazana, Brice Christopher Rabevihavy.
Hetsika Fampiraisana Kristianina ho an’ny Firenena Hanova ireo tsy nety teto amin’ny firenena
Ny 52 %-n’ny Malagasy no fantatra manerana ny Nosy fa kristianina. Ny olana anefa hatreto dia betsaka amin’ireo fiainana hita eny anivon’ny fiarahamonina no tsy araka ny sitrapon’Andriamanitra, hoy ny Hetsika Fampiraisana Kristianina ho an’ny Firenena (HFKF), omaly.
Hazakazaka am-bisikileta sy dia an-tongotra Hotanterahina ny 12 sy 13 mey ho avy izao ny Mbike
Hotanterahina ny 12 sy ny 13 mey ho avy izao indray ny andiany fahatelo amin’ilay hazakazaka am-bisikileta sy dia an-tongotra iraisam-pirenena na ny Mbike Madagascar eo anelanelan’Ambohimanambola sy Mantasoa.
Ligin’ny baolina kitra Analamanga Hetsika 3 no indray nokarakaraina
Hetsika lehibe 3 niavaka tsara no indray nokarakarain’ny ligin’ny baolina kitra Analamanga tarihan-dRakotoarimanana Tôta filohany tamin’iny faran’ny herinandro lasa teo.
Ligue des champions Matsiatra Ambony Mbola mitarika an’isa ny Fc Zanakala
Tontosa tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo (5 sy 6 mey 2018) tao Ampasambazaha sy ny tany Ambalavao ny andro faha-6 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’ny baolina kitra any Matsiatra Ambony na ny « Ligue des champions 2018 Matsiatra Ambony
Lasa nandeha Rafahendrena !
“Ny Hendry mody voky, ny adala misesika ihany”. “Aleo halan’andriana toy izay halam-bahoaka”. “Aleo mifanena amin’ny mpamosavy toy izay mifanena amin’ny mpandainga.”
Faritra Anosy Manana ny harena mampiavaka azy
Na dia lavitra sy ratsy lalana aza ny faritra Anosy dia manan-javatra maro hitondra fampandrosoana any ifotony sy fampiroboroboana ara-toekarena. Betsaka ireo vokatra azo trandrahana tsara ary azo aondrana any ivelany.
Mpianatry ny IT University Hiatrika ny “WebCup International” atsy La Réunion
Namiratra indray ny sekoly ambony tsy miankina IT University tamin’ny fifaninanana goavana momba ny famoronana tranonkala na ny “WebCup Madagascar 2018”, izay natao ny 5 sy ny 6 mey teo.
Lalao hahazoana loka goavana Betsaka ireo mitsapa vintana
Betsaka ireo olona maniry ny hanana fiara eto amintsika. Mila vola hatrany amin’ny 8 tapitrisa Ar anefa raha te-hanana ireny fiara madinika kely mba tsaratsara ireny.
Ny antoko TIM , ny mpitolona rehetra tao amin 'ny Magro dia hanao diabe mankeo amin 'ny kianjan’ny 13 mey anio. Eo amin 'ny Magro Behoririka izy ireo no mifanome fotoana amin 'ny 11 ora hanohana ny hetsiky ny depiote 73 . Hiaraka amin’ny sorabaventy sy tee shirt fotsy izy ireo amin’izany.
Be vaovao mirija Politika
Haneho ny heviny mikasika ny fahitany sy ny fepetra azony raisina manoloana ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny anio ry zareo avy eo anivon’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana na ny CENI. Ho fantatra etsy Nanisana anio, araka izany, ny tohin’ny fanapahan-kevitra horaisin’izy ireo.
Vladimir Poutine Tsy maintsy atao matanjaka sy manankarena i Rosia
76,7% no salan’isa azon’i Vladimir Poutine ny volana martsa teo ary omaly izy no nanao ny fianianany ka hitantana an’i Rosia indray hatramin’ny taona 2024.